के तपाईलाई यी बाइकहरुका बारेमा थाहा छ ?
स्टाइलिस बाइक मन नपराउने यो संसारमा कमै होलान् । विश्वका केही मोटरसाइकल कम्पनीहरु यस्तै स्टालिइस र आकर्षक बाइक निर्माण गर्छन् ।
उनीहरुको बजार पनि राम्रो रहेको छ । आफ्नो बेग्लै पहिचान र समाजमा एक खाले पर्सोनालिटी बनाउन पनि यस्ता बाइक प्रयोग गर्नेहरुको संख्या धेरै रहेको छ ।
यस्ता बाइकहरु महगाँ हुने गर्छन् । यिनीहरुको डिजाइन, संरचना, स्पिड र आउटका कारण पनि महगोँ हुने गरेका छन् । चालकलाई कस्तो खाले बाइक चलाउँदा सजिलो हुन्छ त्यस कुरालाई मध्यनजर गरेर यस्ता बाइकहरु ब्नाउने गरिन्छ । सामान्य मानिसका लागि भने यी बाइकहरु होइनन् ।
करोडपति र अर्वपतिका लागि यस्ता बाइकहरु निर्माण गरिएका हुन् । विश्वका १० महँगा बाइकहरु यस्ता रहेका छन्
१०. निइम्यान मार्कस लिमिटेड एडिसन फाइटर
यो बाइकको डिजाइन कन्फेडेरेट मोटर कम्पनीले बनाएको हो । बाइकमा स्टिलको प्रयोग गरिएको छ । बाइकको आकर्षक लुक रहेको छ । बाइक मुटु कमजोर हुनेलाई चलाउन मनाही गरिएको छ ।
यो बाइकको मुल्य १ लाख १० हजार अमेरिकी डलर रहेको छ ।
यो बाइकको मुल्य १ लाख २० हजार अमेरिकी डलर रहेको छ ।
फ्लांग इगल रोयल इगल कम्पनीको धेरै पुरानो हो । यो बाइक १०० वर्ष पुरानो जति भएपनि बाटोमा राम्रोसँग गुड्ने बाइकमा गनिन्छ । यो क्लासिक राइडरका लागि बनाइएको बाइक हो जो ओल्ड इज गोल्डमा विश्वास गर्छन् । यसको मुल्यले पनि यो बाइकलाई सुन बनाएको छ ।
८. हार्ले डेभिडसन रकर
यो बाइकको मुल्य १ लाख ३० हजार अमेरिकी डलर रहेको छ ।
हार्ले डेभिडसन रकर नमले परिचीत यो बाइक रेसका लागि प्रख्यात रहेको छ । यो बाइकबारे रहेका प्रत्येक कुरा अपत्यारिला रहेका छन् । यो बाइकको फिनिसिङ सबैभन्दा वेस्ट रहेको छ ।
७. हिल्डब्राण्ड वल्फमुलर
यो बाइकको मुल्य १ सय ५० हजार डलर रहेको छ ।
विश्वको सवैभन्दा पहिलो बाइक । बलियो बाइकको रुपमा परिचीत हाल बाइक संकलन गर्ने व्यक्तिका लागि फाइदाजनक भएको छ । यो बाइक अत्यन्त महँगो रहेको छ । केही संख्यामा मात्र रहेका यी बाइकमा टु सिलिण्डर फोर स्ट्रोक इन्जिन रहेको छ ।
६. हव लेस हार्ले डेबिडसन
यो बाइकको मुल्य १ सय ५५ हजार अमेरिकी डलर रहेको छ ।
हव लेस हार्ले डेबिडसन स्टाइलमा निर्माण गरिएको यो बाइक धेरैलाई आकर्षित गरेको थियो । हालसम्म पनि यो बाइकको चाहाना गर्ने मानिसहरु धेरै रहेकाछन् ।
५ इकोसे एफइ टिटि एक्सएक्स
इो बाइकको मुल्य ३ लाख अमेरिकी डलर रहेको छ । यो बाइकको डिजाइनले नै थाहा हुनसक्छ बाइकको मुल्य कति छ भनेर । बाइकको आल्मुनियम इन्जिनबाट २२५ हर्स पावर रहेको छ । साइन लुकमा देखिने यो बाइक चलाउन निकै आकर्षित गर्ने खालेको छ यो बाइक ।
४. द लिजेण्ड्री ब्रिटिस क्लासिक ब्ल्याक
यो बाइकको मुल्य ४ लाख अमेरिकी डलर रहेको छ । यो बाइकको तुलना विश्वमा अन्त रहेका कुनै पनि बाइकसँग हुनै सक्दैन । यो बाइक बेलायतमा निर्माण गरिएको हो । यो बाइकमा दुई सिलिण्डर रहेका छनु भने बाइक २५० सिसि रहेको हो । यो बाइक स्पिड कुदाउन त्यति नमिल्ला तर यो बाइक चलाउँदाको आनन्द भने बेग्लै हुनेछ ।
३. गोल्ड प्लेटेड कस्टम चोपर
इो बाइकको मुल्य ५ लाख अमेरिकी डलर रहेको छ ।
इो बाइक यति सुन्दर छ कि तपाई सजाएर राख्नमात्र चाहानुहुनेछ । यो बाइकलाई बाटोमा लगेर चलाउन सायद तपाईको मन नमान्न पनि सक्छ ।
२ अल्ट्रा रेअर पोरकुपाइन
इो बाइकको मुल्य ७ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर रहेको छ । यो बाँकी धेरै संख्यामा निर्माण नै भएन । यो बाइक दोस्रो विश्वयुद्धताका निर्माण गरिएको हो । यो पहिला म्युजिएममा थियो तर हाल म्युजिएम सपिङ गर्ने ठाउँ भएको छ । यो बाइक नेशनल मोटरसाइकल म्युजिएममा बिक्रीमा राखिएको छ । इतिहासमा रमाउन चाहानेका लागि यो बाइक राम्रो मानिन्छ ।
१. १ मिलियन हार्ले डेभिडसन
यो बाइकको मुल्य १ मिलियन रहेको छ । यदि तपाई अर्वपति हुनुहुन्छ भने यो बाइकको मोह तपाई अवश्य गर्नुहुनेछ । ज्याक आर्मस्ट्रोङले डिजाइन गरेको यो बाइक निकै महँगो रहेको छ । पावरपुल ६ वटा सिलिण्डर भएको यस बाइकको स्पिड पनि उस्तै राम्रो रहेको छ ।